Madaxweynaha oo la kulmay wafti Talyaaniga ka socday + Sawirro. - Caasimada Online
Home Warar Madaxweynaha oo la kulmay wafti Talyaaniga ka socday + Sawirro.
Madaxweynaha oo la kulmay wafti Talyaaniga ka socday + Sawirro.
Madaxwaynaha Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Wafdi Caalami ah oo ka socda Dalka Taliyaaniga oo uu horkacayay Wasiirka Arimaha dibada dalka Taliyaaniga.
Imaanshaha Wafdiga ka dib ayaa waxaa uu wasiirka arimaha dibada Talyaaniga Giulio Maria Terzi ay kulan la qaateen Madaxwaynaha ayaa waxaa aySaxaafada ugu warbixiyeen markii uu soo idlaaday kulankooda.
Madaxwaynaha Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa sheegay in imaanshaha wafdigan ay qayb ka tahay Xiriirka Dowladaha Caalamka ay u danaynayaan Xukuumada Soomaaliya.
Wuxuu hadalkiisa intaa ku daray Madaxwaynaha in tan iyo Markii uu xilkan loo dhaariyay wafdi badan ay Muqdisho soo gaareen kuwaa oo doonaya inay kaalin fiican ka qaataan dib u dhiska Soomaaliya.